POS Software တွေက သင့်ကိုဘာတွေကူညီပေးနိုင်မလဲ – Global POS & GOLD
သင်ဟာ POS Software တစ်ခု ကို ဝယ် လိုက် ပြီးပြီ ပြီးတော့လည်း Hardware ပစ္စည်း တွေ လဲ တပ်ဆင် လိုက် ပြီးပြီဆိုပါစို့။ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ဆိုင်အတွက် လိုအပ်နေတဲ့ လက်လီ အရောင်း စနစ် ကို စ တင် အသုံး ပြု လို့ ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။အရောင်း Transaction တွေကစပြီး Reports တွေမှတ်တမ်းတင် ပေးတာ အပြင် POS software ကို ကျန်တဲ့ အချိန် တွေမှာ ဘာတွေ ဆက်လုပ်ခိုင်းစေ ချင် ပါသလဲ ? မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့ တစ်နေ့တာ ကို လွယ်ကူ သက်သာ အဆင်ပြေ စေဖို့ အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ် လေးတွေ ကို အကောင် အထည် ဖော်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်း စာရင်း နှင့် မှတ်တမ်း
မိတ်ဆွေသင်ဟာ ဂဏန်းသချာၤ တွက်ရေး ချက်ရေး တွေကို ဝါသနာ ပါ တဲ့သူလား ? ဒါဆိုရင်တော့ POS software တွေဟာ မိတ်ဆွေ ရဲ့ နေ့စဉ် အရောင်း တွေကို ကူညီမှတ်ထားပေး ပြီး အရောင်း မှတ်တမ်းတွေကို အဆင်သင့် ကြည့် ရှု နိုင် စေ မှာ ပါ။ဒီစာရင်း တွေက နေ မှ မိတ်ဆွေရဲ့ လက်လီ အရောင်း လုပ်ငန်း မှာ ဘယ်ပစ္စည်း တွေက ရောင်းအား တောက် လျှောက် တက်နေလဲ၊ ဘယ်လို ရာသီချိန်တွေ မှာ ဘယ်ပစ္စည်း တွေက ရောင်းအား အကောင်းဆုံး လဲဆိုတဲ့ သတင်း အချက် အလက် တွေကို သိရှိစေနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ် လို့ သာ မိတ်ဆွေရဲ့ ပစ္စည်း တွေမှာ တစ်ချို့ သော ပစ္စည်း အမျိုးအစား တွေက အမြဲ ရောင်းကောင်း နေ ပြီး တစ်ချို့ ပစ္စည်း အမျိုးအစား တွေက ရာသီ နဲ့ ရောင်းရတာ ဖြစ် လို့ရာသီ မဟုတ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ စင်ပေါ်မှာ ပုံနေတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင်တော့ စောစော ကပြောတဲ့ သတင်း အချက်အလက် တွေသာ ရှိရင် ဘယ် ပစ္စည်း ဘယ်လောက် ရောင်းအား ရှိ သလဲ၊ ပစ္စည်း အရေ အတွက် ဘယ်လောက် ဆိုင်မှာ တင်ထား ရ မလဲ ဆိုတာတွေကို လွယ်လွယ် ကူကူ သိနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုန် ပစ္စည်း လက်ကျန် စာရင်း
ကဲ အခုဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ ရောင်းအား သတင်း အချက်အလက် တွေ ၊ ကုန်ပစ္စည်း လက်ကျန် ပမာဏ တွေကို လက်ဝယ်ရှိ ပြီး ချိန်မှာ တော့ နောက်တဆင့် တက်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ပစ္စည်း ပြန်မှာဖို့ သတိပေး စနစ် ကို POS Software စနစ် တွေမှာ ကြို တင် သတ်မှတ်ထား နိုင်ပါပြီ ။ ဒီလို ဆိုရင် အရမ်းရောင်းကောင်းတဲ့ ပစ္စည်း တွေကို မှာဖို့ ဘယ်တော့ မှ မမေ့တော့ဘူးပေါ့ ။ ဟိုး အရင်ကလို ရောင်းချင်ပေမဲ့ ပစ္စည်း အသစ် ထပ်မှာဖို့ မေ့သွားလို့ ပစ္စည်း ပြတ်သွားတယ် ဆို တာတွေဟာ အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ ။ POS စနစ် က လက်ကျန် ပမာဏ ကို အမြဲ မပြတ် စောင့် ကြည့် ပေးပြီး ပစ္စည်း တွေ မပြတ်ခင် မိတ်ဆွေကို အဆင်သင့် သတိပေး သွား မှာပါ ။နောက်ထပ် အားသာချက် တစ်ခု ကတော့ ပစ္စည်း ပြန်မှာတိုင်း မှာရတဲ့ စရိတ် တွေကို စောင့်ကြည့် နိုင်ပြီး ရေရှည် မှာ မိတ်ဆွေရဲ့ ဖောက်သည် တွေနဲ့ ညှိ နှိုင်း မှု တွေကို အသာစီး ရယူ လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပစ္စည်း တစ်ခု ပြန်မှာတိုင်း ဘယ်ပစ္စည်း ကဘယ်လောက် ဈေး ဆို တာကို တစ်ခု ချင်း လိုက် ရှာ စရာ မလိုတော့ ပါဘူး ။ POS စနစ်မှာ ခလုတ် တစ်ချက် နှိပ်လိုက် ရုံဖြင့် မိတ်ဆွေ လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်း နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ သတင်း အချက်အလက် အားလုံး ကို တစ်ထိုင်တည်း ရရှိ စေမှာပါ ။ ဒါဆိုရင် တော့ ပစ္စည်း မှာတိုင်း မိတ်ဆွေရဲ့ ပစ္စည်း တွေကို ဈေး နှုန်း မှန်မှန် ကန်ကန် နဲ့ ရရှိ စေမှာ ကတော့ အသေအချာ ပါဘဲ ။
ပစ္စည်း တွေ ပြန်မှာ ဖို့ သတိပေး နိုင်တဲ့ စနစ်
ကုန် ပစ္စည်း လက်ကျန် စာရင်း ဆို တာ တကယ်တော့ လက်လီ အရောင်း ဆိုင်ပိုင်ရှင် တွေအတွက် ခေါင်းအကိုက် ရဆုံး နဲ့ အချိန် အကုန် ဆုံး အလုပ် တစ်ခုပါ ။ ဒါပေမဲ့ ဒီပြဿနာ တွေကို POS software ကို သုံး ခြင်း ဖြင့် အချိန်ကုန် ခြင်း ကို တမုဟုတ် ခြင်း လျော့ ကျ သွားစေမှာပါ ။ ပစ္စည်း လက်ကျန် စာရင်း တွေကို တစ်ခုချင်း လက်နဲ့ လိုက် မှတ်နေမဲ့ အစား POS စနစ် လေး တစ်ခု ကို ဝယ်ပြီး ထိန်းချုပ်လိုက်တော့ လက်ကျန် စာရင်း ကောက်တာကို အထစ်အငေါ့ မရှိ ပိုမို လွယ်ကူ သွားစေ မှာ ပါ ။ POS software ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ လက်ကျန် ပစ္စည်း စာရင်း အတွက် ဘာမှ စိတ်ပူ စရာ မလို တော့ ပါဘူး ။ မိတ်ဆွေရဲ့ POS စနစ် မှာ လက်ကျန် ပမာဏ ဘယ်လောက်ရှိ လဲ ဆို တာ အချိန် မရွေး ဆွဲယူ ကြည့် ရှုနိုင် မှာပါ ။
POS software ကို အသုံး ပြု လိုက်တယ် ဆို ရင်ဘဲ မိတ်ဆွေရဲ့ လက်လီ အရောင်း ဆိုင်က ဝယ်သူဖောက်သည် တဦး ချင်း စီ ရဲ့ ဝယ်ယူ မှု မှတ်တမ်း ကို ရရှိ နိုင်မှာပါ ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဝယ်သူ တွေရဲ့ ဈေး ဝယ်တဲ့ ဖြစ်စဉ် လေးကို တစ်ဦး ချင်းစီ အကြိုက် ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာပါ ။ ဝယ်သူ ဖောက်သည် တွေ ဘာ ကြိုက် တတ်လဲ ဆို တာ သိနိုင်ပြီး သူတို့ ကြိုက်တတ်တဲ့ ပစ္စည်း နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အခြား ပစ္စည်း တွေကို ပါ တွဲ ရောင်း နိုင်ဖို့ အခွင့် အရေး ပို ရသွား ပါ ပြီ ။ ဝယ်သူ တွေ ရဲ့ အဝယ် မှတ်တမ်း ကို ကြည့် ပြီး အမြဲတမ်း ဖောက်သည်တွေ ဖြစ်လာ အောင် ဆွဲဆောင် လို့ ရပါသေးတယ် ။ ဝယ်သူတွေရဲ့ အရေး ကြီး တဲ့ အထိမ်း အမှတ်နေ့ တွေ မွေးနေ့ တွေ တို့ မှာ သူတို့ ဝယ်နေ ကြ ပစ္စည်း လေး တွေကို ဈေး လျော့ ပေးတာမျိုး တွေကို လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်မှာပါ ။နောက်ထပ် ဝယ်သူ မှတ်တမ်း ကို အသုံး ပြု နိုင်တဲ့ နည်း တခု ကတော့ ဝယ်သူတွေ ခဏခဏ ပြန်လာ ချင် အောင် မေတ္တာ လက်ဆောင် ပေးတဲ့ အစီအစဉ် လေးတွေလဲ လုပ်လို့ ရပါသေးတယ် ။ ဝယ်သူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ဖြစ်စေ အီး မေးလ် လိပ်စာ ဖြစ်စေ သို့ မဟုတ် ကိုယ်ရေး အချက်အလက် တစ်ခုခု သိ ရုံဖြင့် ဝယ်သူမှတ်တမ်းကို တန်းပြီး ရှာဖွေ နိုင်ပြီး ဝယ်ယူသူ ကို မှတ်မိနိုင်စေမှာပါ ။
ဖောက်သည်တွေရဲ့ အီးမေးလ် လိပ်စာ
ဖောက်သည်တွေရဲ့ အဝယ်မှတ်တမ်း ကို စောင့် ကြည့် နိုင်ရုံ သာမက POS software နဲ့ ဝယ်သူ တွေရဲ့ အီး မေးလ် လိပ်စာ တွေကို တောင်း ယူမှတ်သားထား နိုင်ပါသေးတယ် ။ ဒီ အီးမေးလ် တွေကနေ မှ မိတ်ဆွေရဲ့ အီးမေးလ် အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ် တွေမှာ အသုံးချ နိုင်မှာပါ ။ မိတ်ဆွေ တို့ရဲ့ ဆွဲဆောင် မှု အရှိ ဆုံးသော အရောင်းမြှင့် တင်ရေး အစီအစဉ် တွေကို အီးမေးလ်တွေက နေ သတင်းဖြန့် လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ် ။ အပတ်စဉ်တိုင်း ကိုယ့် ကုန်ပစ္စည်း အသစ် ရောက်တာတွေ ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်တွေ ၊ ဈေး လျှော့ပေးတာတွေကို အီးမေးလ် ကနေ အမြဲမပြတ် ပို့ပေး ခြင်းဖြင့် ဖောက်သည်တွေကို ကိုယ့်ဆီ အမြဲ ပြန်လာအောင် လုပ်တာထက် ပိုကောင်းတဲ့ အစီအစဉ် မရှိ တော့ ပါဘူး ။
ကိုယ့် အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ လက်လီ အရောင်းစနစ် တစ်ခုကို ကိုယ့် ရဲ့ လက်တကမ်း အကွာမှာ ရှိနေ လိုက်တာနဲ့ အသုံးချ နိုင်တဲ့ နည်းလမ်း တွေကတော့ မဆုံးနိုင်အောင်ပါဘဲ ။ အပေါ်မှာပြောထားတာတွေက အိုင်ဒီယာ ၅ ခုဘဲ ရှိ ပါသေးတယ် ။ စပြီး တပ်ဆင်ဖို့ အချိန်လေး နည်းနည်း ပေးလိုက်တာနဲ့ မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့ ဘဝကို ပိုမို ချောမွေ့သွား စေမဲ့ နည်းလမ်း တွေ အများကြီး ရှိပါသေးတယ် ။ နေ့တဓူဝ လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေကို အချိန်နည်းနည်း နဲ့ ပိုပြီး အဆင်ပြေ ချော မွေ့ သွားစေဖို့ အတွက် POS software တွေကို သုံး ပြီး စက်တွေကို ခိုင်းနိုင်ပါပြီ ။ မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်း POS Software တွေသုံးလိုက်မိလို့ ကိုယ့် ကို ကိုယ် ကျေး ဇူး တင်နေမိ မှာ ဖြစ်ပါတယ်။